Dhaamsa!Hogganoonnii, Qondaalonni, Deeggartoonnii fi Miseensinni ABO akkasumas Lammiileen Oromiyaa marti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa!Hogganoonnii, Qondaalonni, Deeggartoonnii fi Miseensinni ABO akkasumas Lammiileen Oromiyaa marti
Dhaamsa!Hogganoonnii, Qondaalonni, Deeggartoonnii fi Miseensinni ABO akkasumas Lammiileen Oromiyaa marti
Hogganoonnii, Qondaalonni, Deeggartoonnii fi Miseensinni ABO akkasumas Lammiileen Oromiyaa marti Abbaa Irree Sirna qeentee leelliisuun dararaa argaa jiru.
Daraaraan kun ammoo Cimina qabsoo Oromoon gaggeessaa jiru waliin yeroo madaala
mu hagamuu miti. Abbaan Irree Aangoo isaa of harka turfatuuf waan isaa danda’ame hunda raaw’achuu irraa of duuba hin deebi’u. Murna PP ijibbaata falmataa jiru jilbeeffachiisnee waan nuuf tolu kan gadi dhaabbatu nuyi. Maaf ta’e jennee ofitti guumgumuun hin barbaachisu. Injifannoo argannee gudunfataa fi herregataa kan nu hafteef waraagama fedhe kafallee fiixaan baafanna.
Sirnichi sodaa qaburraan kan ka’e Hooggantootaafi Sabboontota mana hidhaatti guuruun gaaffii Hiree Murteeffannaa saba keenya ukkamsuuf tattaaffii godhu dhaloonni fashalsaa jira. Hoogganni tarsiimoo fi tooftaa baasa; abbaan raawwii tarsiimoo Akeeka ABO ummata keenya Bal’aa dha. Bakka jirtuu fi dirqama Oromummaan gaafattuuf tokkoon tokkoon namaa Hoogganaa dha. Dhawata Hooggantoota keenya adamsanii qabanii qabsoo keenya gufachiisuuf daaddisan nuti ammoo caalaatti onnannee diinaa keenya qaanessuu qabna.
Kanaaf Caasaan ABO fi Ummati Bal’aan bakka haalli isiniif aanjawu hundatti dirqama keessan akka bahattan, shira diinaa Akeeka Bilisummaa keenyaa dura dhaabbatu dursitanii itti dammaquun akka irra aantan abdii qabna.
Qondaala fi gaafatamaa Siyaasaa ABO